Interview with Dr Lynn Htet Aung (Head of Clinics of Pun Hlaing Clinic - Aesthetic and Laser Centre)) - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
Interview with Dr Lynn Htet Aung (Head of Clinics of Pun Hlaing Clinic – Aesthetic and Laser Centre))
July 30, 2020 | by Pun Hlaing Clinic – Aesthetic and Laser Centre
ယခုအပတ်မှာတော့ Pun Hlaing Clinic - Aesthetic and Laser Centre ရဲ့ Head of Clinics Dr Dr Lynn Htet Aung နဲ့ အင်တာဗျူးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Dr Lynn Htet Aung
Pun Hlaing Clinic – Aesthetic and Laser Centre
Interview Date: July 29, 2020
“ Covid-19 ကတော့ လူသားတွေကြားထဲ ဆက်လက်ရှိနေအုံးမှာပါ။ အချိန် အတိုင်းအတာတော့ မခန့်မှန်းတတ်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ New Normal Life နဲ့ အဆင်ပြေအောင်လို့ ဆေးခန်းကို MOHS Guidlines နဲ့အညီ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တိုးချဲ့ထားပါတယ်။ ဥပမာ Fever တိုင်းတာ၊ လက်ခနခန ဆေးအောင် ပြောတာ၊ Mask ကို ဆေးခန်းလာတိုင်း ဝတ်ဆင်ဖို့၊ ဆေးခန်းလာတိုင်း Health Declaration Form ြဖည့်တာ၊ Foreigners ဆို Passports ယူလာခိုင်းရတာ၊ ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း Personal Protective Equipment တွေကို ဝန်ဆောင်မှု နေရာအလိုက် ဝတ်ဆင်စေတာ၊ လူနာတစ်ဦးလျင် လူနာစောင့် တစ်ဦးပဲ အဖော်ခေါ်လာဖို့ စတဲ့ education တွေကို ပေးနေပါသည်။ ”
အကိုအကြောင်းလေး အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါအုံး ?
ကျွန်တော့ နာမည်က ဒေါက်တာ လင်းထက်အောင်ပါ။ ခုလက်ရှိမှာတော့ ပန်းလှိုင်ဆေးခန်းရဲ့ Head of Clinics အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
ဒီ Clinic ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးနဲ့ ခုဆို ဘယ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီလဲရှင့် ?
ပန်းလှိုင်ဆေးခန်းကို စပီး ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက FMI Centre မှာကတည်းက ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တာပါ။ ခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ၊ ဘိုတစ်ထောင်မြို့နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ (၁၃) နှစ်ကျော် သက်တမ်းရှိပါပီ။
အကိုတို့ Clinic မှာ ရနိုင်တဲ့ Services လေးတွေ တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါရှင့် ?
ဝန် ဆောင်မှုအနေနဲ့ ခုလက်ရှိမှာ ၁) Specialists OPD, ၂) Haemodialysis (ကျောက်ကပ်သွေး သန့်စင်) ၃) မခွဲ မစိတ်ရတဲ့ အလှအပဝန်ဆောင်မှု (Aesthetic & Laser) ၄) Pharmacy ၅) Laboratory ၆) X ray, Ultrasound and Mammogram တို့ဖြစ်ပါသည်။
Clinic အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက ဘယ်နိုင်ငံက အဓိကထားပြီး တင်သွင်းသလဲရှင့် ?
ဒီဆေးခန်းအနေနဲ့ Quality and Patient Safety ကို ဦးစားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် စျေးကွက်ထဲ နာမည်ရှိတဲ့ Brands ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ Philips, GE, Nipro နဲ့ Alma Harmony XL Pro တို့ Accent Prime တို့ရှိပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းအလှအပနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေတ်စားလာတဲ့ အမျှ အကိုတို့ဆီမှာရော ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးက လူသုံးအများဆုံးဖြစ်လာသလဲရှင့် ?
လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှု အနေနဲ့ customers တွေ ရဲ့ကျေနပ်မှု အားပေးမှုများတာတော့ ၁) Contouring (အဆီပို ဖယ်ရှားပေးတာ)၊ Face Tightening (မျက်နှာ အရေပြား ပြန်လည်တင်းစေတာ) ၂) နောက် လူကြီး လူငယ်ကြား ရေပန်းစားတာတော့ Pigmentation (တင်းတိတ်ဖယ်ရှားတာ)၊ Tattoo Removal၊ သွေးရည်ကြည်နဲ့ အသားကို နုပျိုစေတာ ( Vampire Facial)၊ Botox ထိုးတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတောက်ပိုင်း collagen ကြိုးထိုးတာလဲ လာလုပ်တဲ့များလာတာ တေွ့ရပါတယ်။
အရင်တုန်းကအခြေအနေနဲ့အခု COVID ကာလ အခြေအနေတွေမှာဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေရှိပါသလဲရှင့် ?
အများကြီးပါပဲ။ အထင်ရှားဆုံး ကွာခြားချက်ကတော့ Telemedicine ပါပဲ။ Covid-19 ကြောင့် အပြင်ထွက်ရမှာ ကြောက်တာတော့မှန်ပေမဲ့ သောက်နေကျဆေးတို့ ၊ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ပုံမှန် follow up လုပ်တာတို့ တခြားသော ရောဂါတွေ ဆွေးနွေးဖို့ကလဲ ဘယ်လောက်ပဲ covid-19 ဆိုးရွားပေမဲ့ ဆက်လက်ကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးခန်းအနေနဲ့ Telemedicine service ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပီ လူနာများကို သောက်လက်စဆေး မပြတ်အောင် delivery services တို့ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ အချိန်မှန် ဆွေးနွေးလို့ရအောင် tele services တို့ကို ခုအခါ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် ဝန်ဆောင်မှု ပေးဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို Clinic တွေ COVID အပြီး ပြန်ဖွင့်ကြတဲ့အခြေအနေမှာရော ဘယ်လိုအခတ်အခဲတွေကြုံရသေးလဲရှင့် ?
Covid-19 ကတော့ လူသားတွေကြားထဲ ဆက်လက်ရှိနေအုံးမှာပါ။ အချိန် အတိုင်းအတာတော့ မခန့်မှန်းတတ်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ New Normal Life နဲ့ အဆင်ပြေအောင်လို့ ဆေးခန်းကို MOHS Guidlines နဲ့အညီ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တိုးချဲ့ထားပါတယ်။ ဥပမာ Fever တိုင်းတာ၊ လက်ခနခန ဆေးအောင် ပြောတာ၊ Mask ကို ဆေးခန်းလာတိုင်း ဝတ်ဆင်ဖို့၊ ဆေးခန်းလာတိုင်း Health Declaration Form ြဖည့်တာ၊ Foreigners ဆို Passports ယူလာခိုင်းရတာ၊ ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း Personal Protective Equipment တွေကို ဝန်ဆောင်မှု နေရာအလိုက် ဝတ်ဆင်စေတာ၊ လူနာတစ်ဦးလျင် လူနာစောင့် တစ်ဦးပဲ အဖော်ခေါ်လာဖို့ စတဲ့ education တွေကို ပေးနေပါသည်။ အခက်အခဲကတော့ ခုက change in lifestyle and change in services ဆိုတော့ တော်တော်လေး education ပေးရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ Your Fitster - Mobile App အတွက် ဘာများပြောချင်တာရှိသေးလဲ?
ဟုတ်။ ကောင်းပါတယ် ကျန်းမာရေးကော ဝန်ဆောင်မှုကော။ ဒီထက်မက ပိုပီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။